Inqubomgomo Yemfihlo - The UnCommission
Kugcine ukubuyekezwa: Okthoba 5, 2021
Le nqubomgomo yobumfihlo ("Inqubomgomo Yobumfihlo") isebenza kumawebhusayithi we-100Kin10, iphrojekthi exhaswe ngezimali yeTides Center, inkampani engenzi nzuzo yomphakathi yaseCalifornia ("thina," "us," "yethu"), etholakala ku-https: / /100kin10.org, https://uncommission.org, https://grandchallenges.100kin10.org, naku-https: //www.starfishinstitute.org ("amawebhusayithi").
Ubumfihlo bakho bubalulekile kithi. Le Nqubomgomo Yobumfihlo ichaza imininingwane esingayiqoqa kuwe noma ongayinikeza lapho uvakashela amawebhusayithi nemikhuba yethu yokuqoqa, ukusebenzisa, ukugcina, ukuvikela nokudalula imininingwane. Le Nqubomgomo Yobumfihlo isebenza kulwazi a) ungasinika ngokuzithandela lapho uvakashela amawebhusayithi; b) singaqoqa ngokuzenzekelayo uma uvakashela amawebhusayithi; futhi c) ukuthi singaqoqa kusuka kubantu besithathu nakweminye imithombo.
Sicela ufunde le Nqubomgomo Yobumfihlo ngaphambi kokusebenzisa amawebhusayithi. Ngokuvakashela Iwebhusayithi noma ukusinikeza imininingwane ngeWebhusayithi, uvumelana nemibandela yale Nqubomgomo Yobumfihlo kanye Imigomo nemibandela yokusebenzisa. Ngamanye amazwi, uma ungavumelani nale Nqubomgomo Yobumfihlo, akufanele usebenzise Amawebhusayithi.
Awudingi ukuthi unikeze noma yiluphi ulwazi lomuntu siqu ukuvakashela amawebhusayithi. Kodwa-ke, singaqoqa imininingwane kusuka nakumayelana nabavakashi bamawebhusayithi. Lolu lwazi lungakukhomba wena uqobo njengegama, inombolo yocingo yekheli le-imeyili, ikheli leposi, imininingwane yabantu kanye nolunye ulwazi olufanayo (“Ulwazi Lomuntu Siqu”). Siqoqa Ulwazi Lomuntu Siqu nolunye ulwazi ngezindlela ezimbili: 1) usinikeza lona ngokuzithandela; no-2) ngokuzenzakalela njengoba uvakashela amawebhusayithi ethu.
Imininingwane Osinikeza yona: Ungakhetha ukuthumela imininingwane yakho yomuntu siqu kithi ngezizathu ezahlukahlukene. Izibonelo zifaka phakathi: ukubhalisela izincwadi zezincwadi ze-imeyili ezivela kithi; ukubhalisela ukuthola ulwazi mayelana nomsebenzi wethu, izinhlelo, izinhlelo, noma imicimbi; ukugcwalisa “Xhumana Nathi” noma elinye ifomu eliku-inthanethi ukubuza umbuzo noma ucele imininingwane; ukuxhumana nathi nge-imeyili. Uma ungathanda ukuvuselela noma ukususa imininingwane osinikeze yona, sicela uxhumane info@tides.org futhi info@100Kin10.org.
Imininingwane eqoqwe ngokuzenzakalela: Lesi sigaba solwazi sifaka ikheli le-Internet Protocol (“IP”) lekhompyutha noma ithuluzi olisebenzisayo ukufinyelela amawebhusayithi; ikheli le-inthanethi lesayithi oxhume kulo namawebhusayithi; nezixhumanisi ozilandelayo ezivela kumawebhusayithi.
Amakhukhi nobuchwepheshe obufanayo:Imininingwane eqoqwe ngokuzenzakalela ”ifaka nemininingwane eqoqwe ngamakhukhi wesiphequluli noma obunye ubuchwepheshe bokulandelela. Amakhukhi amafayili wedatha amancane abekwe kwikhompyutha yakho lapho uvakashela isayithi. Amakhukhi asebenzela izinhloso ezahlukahlukene, njengokusisiza siqonde ukuthi isiza sethu sisetshenziswa kanjani, kukuvumela ukuthi uzulazule phakathi kwamakhasi kahle, ukhumbule okuthandayo, futhi uthuthukise umuzwa wakho wokuphequlula. Amakhukhi akuyona ukuphela kwendlela yokulandela izivakashi kuwebhusayithi. Singahle futhi sisebenzise amafayili emidwebo emincane anezihlonzi ezihlukile ezibizwa ngokuthi ama-beacon (kanye nama "pixels" noma "clear gifs") ukubona lapho othile evakashela amasayithi ethu.Ngokwenza izilungiselelo ezifanele kusiphequluli sethu, ungakhetha ukungawamukeli amakhukhi. Kodwa-ke, sicela wazi ukuthi uma wenza lokhu kukhetha, ungahle ungakwazi ukufinyelela izingxenye ezithile zamawebhusayithi. Uma usebenzisa isilungiselelo sesiphequluli esikuvumela ukwamukela amakhukhi, uyavuma ukusebenzisa kwethu amakhukhi. Futhi, qaphela ukuthi obunye bobuchwepheshe bokulandelela okungewona amakhukhi kuvame ukuncika kumakhukhi ukuze asebenze kahle, ngakho-ke ukukhubaza amakhukhi kungaphazamisa ukusebenza kwawo. Ezinye iziphequluli ze-Intanethi zingalungiselelwa ukuthumela amasiginali athi "Ungalandeleli" kumasevisi aku-inthanethi owavakashelayo. Okwamanje asiphenduli kokuthi "Ungalandeli" noma amasiginali afanayo. Ukuthola kabanzi mayelana ne- "Do Not Track," sicela uvakashele http://www.allaboutdnt.com.
Ulwazi Siluthola Kwabanye: We bangathola Ulwazi Lomuntu Siqu ngawe oluvela kweminye imithombo, kufaka phakathi inhlangano yakho noma inkampani, abanye abacabanga ukuthi ungaba nentshisekelo emsebenzini wethu, imithombo etholakala esidlangalaleni, kanye nabahlinzeki bama-analytics abavela eceleni. Isibonelo, singathola imininingwane yakho uma umuntu enhlanganweni yakho ekuqoka njengomuntu oxhumana naye kuleyo nhlangano.
Ukusetshenziswa Kwethu Kwemininingwane Yakho
Singasebenzisa ulwazi esiluqoqayo ukwenza okulandelayo:
Xhumana nawe, kufaka phakathi ukuphendula imibuzo yakho nezicelo zakho.
Sebenzisa, ulondoloze, uphathe futhi uthuthukise amawebhusayithi.
Yenza ucwaningo nokuhlaziya maqondana nabasebenzisi bamawebhusayithi namaphethini wokusebenzisa.
Xhumana nawe mayelana nezinguquko kumawebhusayithi noma inqubomgomo yobumfihlo, uma kudingeka senze njalo.
Dala imininingwane ehlanganisiwe nenye engaziwa kusuka kulwazi lwabasebenzisi bethu kodwa ingaxhunyanisiwe kunoma yiluphi ulwazi lomuntu siqu, esingabelana ngalo nabantu besithathu ngezinjongo zebhizinisi ezisemthethweni.
Vikela amawebhusayithi, kufaka phakathi ukuthola, ukuphenya, nokuvimbela imisebenzi engahle yephule izinqubomgomo noma umthetho wethu.
Thobela umthetho. Singasebenzisa Ulwazi Lwakho Lomuntu Siqu njengoba sikholwa ukuthi kufanelekile (a) ukuhambisana nemithetho esebenzayo, izicelo ezisemthethweni kanye nenqubo yezomthetho, njengokuphendula amabizwana noma izicelo ezivela kuziphathimandla zikahulumeni; futhi (b) lapho kuvunyelwe umthetho maqondana nophenyo lwezomthetho.
Thola imvume yakho. Kwezinye izimo singacela imvume yakho yokuqoqa, ukusebenzisa noma ukwabelana ngolwazi lwakho lomuntu siqu ngendlela engafakwanga yile Nqubomgomo Yobumfihlo. Ezimweni ezinjalo, singakucela ukuthi "ukhethe ukungena" ekusetshenzisweni okunjalo.
Izindlela Esabelana Ngazo Ngemininingwane Yakho
Singadalula imininingwane yakho yangasese kuzinhlangano ezihlobene ne-Tides Foundation noma i-Tides Network noma abahlinzeki bezinsizakalo ezivela eceleni esizibandakanya nabo ukusisiza ukuthi sisebenzise amawebhusayithi futhi siphathe imisebenzi egameni lethu. Izibonelo zifaka ukusingathwa kwamawebhusayithi ethu, ingosi noma enye ingxenyekazi, izinsizakalo zobuchwepheshe bolwazi, nokuphathwa kwedatha. Uma laba bahlinzeki bezinsizakalo ezivela eceleni bekwazi ukufinyelela ku-Imininingwane yakho, badinga ukuvikela imfihlo yolwazi futhi balusebenzise kuphela ngenhloso elinganiselwe enikezwe yona.
Singasebenzisa noma siveze imininingwane yakho yangasese njengoba sibona kunesidingo ngaphansi kwemithetho esebenzayo; ukuphendula izicelo ezivela kuziphathimandla zomphakathi, zikahulumeni nezokulawula; ukulandela imiyalo yenkantolo, izinqubo zamacala, nezinye izinqubo, ukuthola amakhambi asemthethweni noma ukunciphisa umkhawulo wethu; nokuvikela amalungelo, ukuphepha, noma impahla yabasebenzi bethu, wena noma abanye.
Singadlulisa noma sabelane ngemininingwane yakho ephathelene nokuhlangana, ukutholwa, noma okunye ukuthengiselana noma ukudluliswa kwempahla, ngokuya ngezidingo ezifanele zobumfihlo, futhi sikunikeze nesaziso uma kudingeka ngokomthetho.
Ukuphepha Kwemininingwane Yakho Yomuntu kubalulekile kithi. Sithatha izinyathelo eziningi zenhlangano, ezobuchwepheshe nezomzimba ezenzelwe ukuvikela imininingwane yomuntu esiyiqoqayo. Kodwa-ke, ubungozi bezokuphepha bukhona kubo bonke ubuchwepheshe be-inthanethi nolwazi, futhi asikwazi ukuqinisekisa ukuphepha okuphelele Kwemininingwane Yakho. Sizothobela imithetho esebenzayo kanye nemithethonqubo edinga ukuthi sikwazise uma kwenzeka imininingwane yakho yangasese ifakwa engcupheni ngenxa yokwephulwa kwezinyathelo zethu zokuphepha.
Sigcina imininingwane yakho yangasese uma nje kudingeka ukuze sifeze izintshisekelo zethu ngokuya ngale Nqubomgomo Yobumfihlo, izinqubomgomo zethu zokugcina, kanye nomthetho osebenzayo.
Ngemininingwane yakho nokusebenziseka kalula, lawa mawebhusayithi angaqukatha izixhumanisi eziya kumasayithi enkampani yangaphandle. Lawa mawebhusayithi wesithathu awekho ngaphansi kolawulo lwethu futhi alawulwa yizimiso zawo zobumfihlo kanye nemibandela yokusebenzisa. Ngaphezu kwalokho, izixhumanisi ezivela eceleni aziphakamisi ukuzibandakanya, ukugunyazwa noma ukuxhaswa yithi nganoma isiphi isiza esixhunywe kuso.
Ukuhambisana noMthetho Wokuvikelwa Kobumfihlo Bezingane ku-Inthanethi
Ukuvikela ubumfihlo babantwana kubaluleke kakhulu. Ngaleso sizathu, asiqoqi ngamabomu imininingwane kumawebhusayithi kusuka kulabo esaziyo ukuthi bangaphansi kweminyaka engu-16. Ngaphezu kwalokho, ayikho ingxenye yamawebhusayithi eyakhiwe ngokukhethekile ukuheha noma ngubani ongaphansi kweminyaka engu-16. Uma sazi ukuthi sinolwazi nganoma ngubani ongaphansi kweminyaka engu-16, izosusa imininingwane ngokushesha.
Kungaba nezinkundla kumawebhusayithi ethu okuthi, ngenxa yesithangami namandla weWebhusayithi yethu, afake isexwayiso sokuthi imininingwane efakiwe "imininingwane yomphakathi." Imininingwane enjalo iphathwa ngendlela ehlukile ngenhloso yale Nqubomgomo Yobumfihlo njengolunye ulwazi oluchazwe lapha. Uma sisebenzisa ibinzana elithi ulwazi lomphakathi, sisho ukuthi imininingwane ingabukwa esidlangalaleni ngaphakathi noma ngaphandle kwamawebhusayithi ethu.
Ngokufaka imininingwane yakho ezigabeni zamaWebhusayithi wethu ezixwayisa ngokuthi imininingwane efakiwe izoba imininingwane yomphakathi, uyavuma ukuthi asiqinisekisi ukuthi lolo lwazi luzohlala luyimfihlo; ngaphezu kwalokho, uyavuma ukuthi asinasibophezelo kunoma ikuphi ukudalulwa kolwazi lomuntu siqu kanye nanoma yiziphi izinqumo ezisemthethweni eziphathelene nalokho. Impela, ngoba asiqinisekisi ukuthi imininingwane enjalo izohlala iyimfihlo, kufanele ulindele ukuthi noma ngubani, kufaka phakathi abantu abangaphandle kwamawebhusayithi ethu, bazokwazi ukuyibona.
Amalungelo obumfihlo eCalifornia
Uma uhlala eCalifornia futhi usinikeze imininingwane ekhomba wena uqobo, ungacela imininingwane kanye ngonyaka ngekhalenda mayelana nokudalulwa kwethu kwezigaba ezithile zemininingwane yakho engakhonjwa kubantu besithathu ngezinjongo zabo zokuthengisa ngqo. Izicelo ezinjalo kumele zithunyelwe kumaTide ku- info@tides.org.
Imininingwane yabasebenzisi abangaphandle kwe-United States
Lawa mawebhusayithi ashicilelwa e-United States futhi angaphansi kwemithetho yase-United States. Uma ungumhlali wase-EU noma isakhamuzi, unamalungelo angeziwe mayelana neMininingwane yakho ehambisanayo ngokuya nge-General Data Protection Regulation (“GDPR”), kufaka phakathi ilungelo lokucela ikhophi lemininingwane yakho siqu esingaba nayo, kanye ilungelo lokucela ukuthi sibuyekeze, sisuse noma singavezi leyo mininingwane. Uma unemibuzo ethile noma izicelo eziqondene ne-GDPR, sicela uthinte amaTides ku- GDPR@tides.org.
Izinguquko Kunqubomgomo Yethu
Singabuyekeza le Nqubomgomo Yobumfihlo nganoma yisiphi isikhathi. Uma senza kanjalo, sizoshintsha idethi "Yokugcina Ukubuyekezwa" phezulu kuleli khasi. Sikukhuthaza ukuthi uphinde uhlole kaningi ukuze uhlale unolwazi nganoma yiziphi izinguquko Kunqubomgomo Yobumfihlo. Ukuqhubeka kwakho usebenzisa amawebhusayithi ngemuva kokuthi sithumele izinguquko kusho ukuthi uyavumelana nalezo zinguquko.
Uma unemibuzo noma imibono mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo noma yini ephathelene namawebhusayithi, sicela uxhumane nabakwaTides ku info@tides.org. Imibuzo nezicelo eziqondene ne-GDPR zihanjiselwa kangcono GDPR@tides.org.